Hadiyado waaweyn & Securities - BullyingCanada
Sida aad saameyn weyn ugu yeelan karto caafimaadka maskaxda carruurta la xoogsheegtay
Waxaad isla markaaba saameyn kartaa caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada ee beeshaada iyo Kanada oo dhan adiga oo wax ku deeqaya BullyingCanada.
BullyingCanada waxay ku tiirsan tahay tabarucaad shaqsi, bulsho, aasaas iyo shirkad inta badan maalgelinteena. Hadiyadaha waaweyni waxay door muhiim ah ka ciyaaraan joogteynta adeegyadayada taageerada 24/7 ee carruurta la dhibay ee la dhibay, iyo bandhigayada waxbarasho ee firfircoon ee ku saabsan cagajuglaynta dugsiyada, goobaha shaqada, iyo xarumaha bulshada. Deeqsinnimadaada aadka u wanaagsan waxay naga caawin doontaa inaan la socono tirada sii kordheysa ee carruurta na soo wacaysa si aan u caawinno oo aan kor ugu qaadno macluumaadka iyo agabka aan ku siin karno khadka tooska ah 104 luqadood.
Waxaad saameyn naf-badbaadin ah ku yeelan kartaa dhallinta la xoogsheegtay adigoo ku deeqaya la mahadiyay Securities-ka guud ee ganacsiga. Markaad sidaas samayso, waxaad sidoo kale ka faa'iidaysan doontaa inaadan bixin cashuurta faa'iidada raasumaalka hadiyaddaada. Si aad uga faa'iidaysato cashuur dhaafkan, deeqdaada waa in loo sameeyaa si gaar ah. Fadlan soo dejiso Hibada Xaashida Xaqiiqda Dammaanadda Wixii macluumaad dheeraad ah, ama nala soo xiriir sida hoos ku xusan.
Haddii aad dano gaar ah ka leedahay BullyingCanadaShaqada, waanu soo dhawaynaynaa inaan kaala hadalno saamaynta aad jeceshahay in hadiyaddaada ay yeelato. Waxaan sidoo kale ku siin karnaa aqoonsi dadweyne oo ku saabsan taageeradaada, haddii aad rabto. Oggolaanshaha inaanu si guud kuugu mahadnaqno waxay dhiirigelinaysaa kuwa kale inay sidaas oo kale sameeyaan!
Fadlan naga soo wac (877) 352-4497 ama iimayl ahaan: [emailka waa la ilaaliyay]
Anagoo abaal marin siina taageereyaasheenna ugu deeqsisan
Waxaan abaal ugu haynaa shaqsiyaadka, ganacsiyada, aasaaska iyo ururada daneeya!
Lagu xasuusto naxariistaada dhalinyarada la xoogsheegtay, oo taageer carruurta nugul jiilka soo socda!
In lagugu aqoonsado muwaadinka wanaagsan ee aad tahay!
Baabuurkaaga aan loo baahnayn u rog taageero nolol badbaadineed!